‘कोटेश्वरको जाम हटाउन एयरपोर्टमुनिबाट सुरुङमार्ग बन्छ’ - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
‘कोटेश्वरको जाम हटाउन एयरपोर्टमुनिबाट सुरुङमार्ग बन्छ’
असार ०८, २०७५ 7057 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
कोटेश्वरमा हुने दैनिक ट्राफिक जामका कारण सर्वसाधारणले निकै सास्ती खेप्दै आएका छन् । ‘खुसी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा अघि सारे पनि सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काममा ध्यान दिएको देखिँदैन । विकास र समृद्धिको नारा अघि सारिएको छ । तर, यसको आधारको रेखांकन गरिएको छैन ।
उपत्यकाको धूवाँ र धुलोले नागरिकको जीवन अत्यास लाग्दो बनिरहेको छ । पूर्वबाट काठमाडौं भित्रिने मुख्य नाका कोटेश्वरमा दैनिक घन्टौं जाम हुन्छ । जाम व्यवस्थापन गर्न सर्भिस ट्र्याक ओपन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले यसमा पनि ध्यान दिएको छैन ।
कोटेश्वरमा सर्वसाधारण मात्र होइन, बिरामी बोकेका एम्बुलेन्ससमेत लामो जाममा फस्छन् । त्यही जाममा कति बिरामीको ज्यानै गएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीनकुने–एयरपोर्ट–जडिबुटी सुरुङमार्ग निर्माणको घोषणा गरेको छ । सुरुङ मार्ग बन्ला या नबन्ला त्यो भोलि नै थाहा होला ।
दुई जिल्लाको नाकामा हुने ट्राफिक जाम व्यवस्थापन तथा सडक विस्तारबारे भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद महेश बस्नेतसँग ऊर्जा खबरले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको संक्षेप :
अबको ५ वर्षपछि भक्तपुर कस्तो बनाउने योजना छ ?
जनतामा जुन आशा देखाएका छौं । निर्वाचनमा जनताले भरोसा गरे । हामीले भक्तपुर मिसन भनेर काम अघि बढाएका छौं । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कलकारखाना, पूर्वाधार, सडक, उज्यालो, सुरक्षित, र समृद्ध भक्तपुरको अभियान सुरु भएको छ । जनताले महसुस गर्ने गरी काम हुन्छ । मेरो ५ वर्षे कार्यकालमा भक्तपुरको रौनक फेरिएको हुनेछ । त्यतिबेलाको भक्तपुर आजकोसँग तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ ।
भक्तपुर र काठमाडौं जोड्ने सडक व्यवस्थापन गर्न यहाँसँग के योजना छ ?
पहिलो काम सडक र सवारी व्यवस्थापन हो । राजधानीबाट बाहिरिने र भित्रिने नाकामा बढी ध्यान दिनुपर्छ । अब छिट्टै तापोपानी नाका खुल्दैछ । र, भक्तपुरमा स्मार्ट सिटी बन्दैछ । यसो हुँदा सडक अपुग हुन्छ । बढ्दो सहरीकरणले भएका सडक साँघुरा हुँदैछन् । आवश्यकता अनुसार सडक निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । अब निर्माण तथा विस्तार हुने सडकको काम रोकेर योजनाबद्धरूपमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
कोटेश्वरको ट्राफिक जामले यात्रुहरूको दैनिकी अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । यसबारे यहाँले के योजना बनाउनुभएको छ ?
कोटेश्वरमा अधिक ट्राफिक जाम हुने गरेको यथार्थ हो । यसको दिगो व्यवस्थापन गर्न एयरपोर्टमुनिबाट सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू वर्षदेखि नै विस्तृत अध्ययन सुरु हुन्छ । अहिले पेप्सीकोला–सल्लाघारी सडक २० मिटर बन्दैछ । सूर्यविनायक–धुलिखेल जापान सरकारको सहुलियत ऋणमा सडक विभागले यसमा काम गरिरहेको छ ।
च्यामासिंह-नाला हुँदै बनेपा आउजाउ गर्ने वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्छ । यसो हुँदा भक्तपुरबाट काठमाडौं तथा पूर्व जाने–आउने सवारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । उता एयरपोर्टको दायाँबायाँ सर्भिस ट्र्याक छैन । ६ लेन सडकमा जडिबुटीदेखि भुक्तपुरतर्फ सर्भिस ट्र्याक छ । एयरपोर्ट सर्भिस ट्रयाक दिन सकारात्मक छ । तर, विभागले यसमा पर्याप्त काम गरेको छैन । करिब साढे २ करोड रुपैयाँ भए एक/दुई महिनामै ट्रयाक बन्छ । यसले कोटेश्वरको जाम घटाउन सक्छ ।
उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिएको हो ?
सरकारले भक्तपुरको साँगामा गाडी धुने स्थान पहिचान गरेर उपत्यका भित्रिने गाडी अनिवार्य धुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । १५ रोपनी जग्गामा यस्तो व्यवस्था गरे साँगाबाट काठमाडौ भित्रिने धुलो रोकिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले प्रदुषणयुक्त गाडी रोक्न सकेको छैन् । अब पुराना गाडी सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ । यसमा राजनीतिक दलले दबाब दिएकै छन् ।
भरपर्दो बसपार्क नहुँदा पनि समस्या जटिल बन्दै गएको हो ?
पूर्व चल्ने यातायातका लागि व्यवस्थित बसपार्क छैन । मनाेहरा पुलको दायाँबायाँ खोला ढलान गरेर आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माण गर्न सकिन्छ । खोलाको दायाँबायाँ २० मिटर छ, खोलो ३० मिटर । ७० मिटर जग्गामा ४ किलोमिटर बसपार्क बनाउन सकिन्छ । सरकारले नै निर्माण गरी शुल्क उठाउनुपर्छ । यसो गरे खोलाको दुर्गन्ध हुँदैन । यहाँबाट नगरबस सञ्चालन गर्न सकिन्छ । र, उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन पनि हुन्छ ।
भक्तपुर सल्लाघारीमा बसपार्क बनाउने कुरा आएको छ नि ?
सल्लाघारीमा ९९ रोपनी जग्गा छ । यसमा सबैको आँखा परेको छ । यो नेपाल ट्रष्टको जग्गा हो । यहाँ बसपार्क बनाउने कुरा हुन सक्ला । तर, प्रक्रियामा जाँदा धेरै ढिलो हुन्छ । विकल्पको रूपमा मनाेहरा खोलामाथि बसपार्क बनाउन सकिन्छ । काठमाडौंबाट नजिक पनि हुन्छ ।
भक्तपुरभित्र सञ्चालित इट्टाभट्टाले निकै प्रदुषण बढाएका छन् । के अब सधैं सञ्चालन गर्न दिइरहने ?
म आफैं उद्योग मन्त्री हुँदा ५ वर्षभित्र उपत्यकाबाट इट्टाभट्टा हटाउने निर्णय भएको थियो । अब दुई वर्षभित्र त हटाउनैपर्छ । उपत्यकाका ४ ठाउँमा स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारी योजना छ । यसैले इट्टाभट्टा हटाउनुको विकल्प छैन ।
के यही गतिले स्मार्ट सिटी बन्छ ?
स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने हल्लाले जग्गा होल्ड भएको छ । जति धेरै ढिला हुन्छ, जनताको आक्रोश बढ्दै जान्छ । प्रक्रिया निकै ढिलो भइसक्यो । कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्न २ वर्ष लाग्यो । उसले एक वर्षको समय पाएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर काम अघि बढाएपछि सहरको खाका देखिन्छ । सडक र ओपन स्पेसको टुंगो लाग्छ । डिपिआर टुंगिएपछि जग्गा होल्ड गर्नुपर्दैन । निर्माण सुरु गर्न सकिन्छ । अबको ३ बर्षभित्र स्मार्ट सिटी निर्माण सुरु गर्नुपर्छ ।
सवारी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै बाहिरी चक्रपथ निर्माणको चर्चा गरियो । तर, कामले गति लिएन नि ?
भक्तपुरमा पनि चक्रपथ निर्माण गर्न ल्यान्डपुलिङ सुरु भएको छ । सरकारले दायाँबायाँ २ सय ५० मिटर जग्गा लिएर सडक निर्माण गर्न सक्छ । स्मार्ट सिटी निर्माण हुने भएपछि भक्तपुरमा चक्रपथ निर्माण गर्न समस्या पर्दैन । थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनले ५-५ किलोमिटर जग्गा अधिकरण गरेको छ । यसको दुवैतिर सडक निर्माण गर्ने हो भने १० मिटर जग्गा बचत हुन्छ । यसले बाहिरी चक्रपथ निर्माणलाई पनि सहज बनाउँछ । तर, कामको गति सुस्त भएको छ ।